I-Modern Character House - eduze ne-Broadway&University
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Jillian
Uzoyithanda le ndawo! Uma uhlala lapha ukuhambo lwemizuzu emi-5 kuphela ukuya endaweni yase-Saskatoon's Broadway, lapho kunezindawo zokudlela ezinhle, izindawo zokudlela eziqashisayo, izitolo zezingubo nokufinyelela ezindleleni zomfula. Hamba ngezinyawo noma uhambe ngebhayisikili ibanga elifushane uye eNyuvesi kanye nedolobha.
Indlu igcwele yonke into kusukela emabhodweni namapani, ukuya emidlalweni yezingane nezingubo zokulala ezithokomele zokubuka amamuvi!
Ezinyangeni ezifudumele wamukelekile ukujabulela ingadi ebiyelwe ngokuphelele enedesika enelanga!
Yonke indawo ephambili yale bungalow ingeyakho! Kunamakamelo okulala ama-2; enye iyi-master suite kanti enye inombhede ophindwe kabili. Isitezi esikhulu sinomqondo ovulekile omuhle kakhulu wokuvakashela ngenkathi upheka! Kukhona nelondolo endaweni engaphansi.
I-Nutana ingenye yezindawo ezingomakhelwane eziyigugu zase-Saskatoon. Kuyikhaya lomunye wemigwaqo esezingeni eliphezulu okwazi ukufinyelela kuyo yonke imifula yokuhamba nokuhamba ngebhayisikili kanye neNyuvesi. Isungulwe ekuqaleni kwawo-1900s i-Nutana iyikhaya lamakhaya abalingiswa amahle eduze kwemigwaqo enemigqa yezihlahla. Indawo efunwa kakhulu!
Ungangithola ngokuthumela umlayezo ngohlelo lokusebenza.